Iinxalenye zeVSI Wear (Rotor Parts)
I-Barmac VSI Orange RC yeerotor yothotho
I-RC840 ROTOR, Iirotors zoluhlu lweorenji ezintsha zinokuphucula kakhulu imveliso yexesha elongezelelweyo ngokwandisa ubomi bendawo kunye nolondolozo olukhawulezayo.
I-GUBT ibonelela ngee-cone ze-manganese-cone liners, ezifanelekileyo i-crusher crusher kunye ne-gyrator crusher.
I-GUBT yingcali yasemva kophawu lwentengiso yee-cone crusher, kwaye ukugubungela kwayo iinxalenye zecone crusher kwisitokhwe akunakuthelekiswa nanto.
I-GUBT ibonelela ngee-liners zemihlathi ezenziwe ngentsimbi ye manganese, efanelekile kwizityholo zomhlathi ezahlukileyo kwihlabathi liphela. Ukubonelela ngamacandelo kunye nenkxaso yezobuchwephesha kwimigodi, ngokudibeneyo, kunye nokurisayikilikwa kwishishini emva kweemakethi!
I-GUBT yingcali ebalaseleyo yasemva kwemakethi yezikhuselo zomhlathi, kwaye ukugubungela kwayo iinxalenye zomhlathi zomgubo kwisitokhwe akunakuthelekiswa nanto.
I-GUBT yinkokeli yehlabathi kumhlaba we-VSI emva kwendawo. Sineenjineli zobungcali kwicandelo le-VSI kwaye sityale ixesha elininzi kunye namandla okuphuhlisa itekhnoloji kwi-VSI ukuze imveliso yeVSI PARTS ye-GUBT iqhubeke ikhula ngokukhawuleza. Xa kuthelekiswa neemveliso zeVSI ngokubanzi kwintengiso, iimveliso ze-VSI ze-GUBT zinezinto ezithile ezizodwa, kubandakanya umphezulu ogudileyo, ubungakanani obuchanekileyo, ukumelana nokunxiba okuphezulu, kunye nobomi obude bokunxiba.
Ukuxhomekeka kumava emveliso aphumelele kakhulu, ubungcali, kunye nozinzo lomgangatho kwicandelo le-VSI, i-GUBT ijonge ukunceda abathengi ukunciphisa iindleko, ukwandisa ukubakho kwamacandelo, ukunciphisa ixesha lokuphumla, kunye nokubonelela ngenkonzo ebhetele emva kokuthengisa.
I-GUBT ibonelela nge-Liner YAKHE eyenziwe ngentsimbi ye manganese, i-chromium ephezulu, kunye ne-Hardox yesinyithi, efanelekileyo kwiicrusher ezichaphazela umhlaba wonke. I-GUBT ibonelela ngamacandelo kunye nenkxaso yezobuchwephesha kwimigodi, ngokudibeneyo kunye nokurisayikilishwa kwishishini emva kweempawu!
Ukuxhomekeka kumava emveliso aphumeleleyo kakhulu, ubungcali, kunye nozinzo lomgangatho kwicandelo le-HSI, i-GUBT ijonge ukunceda abathengi ukunciphisa iindleko, ukwandisa ukubakho kwamacandelo, ukunciphisa ixesha lokuphumla, kunye nokubonelela ngenkonzo ebhetele emva kokuthengisa.
I-GUBT yinkokeli yehlabathi kushishino lokuphosa. Sineqela leenjineli zokuphosa ngobuchule kwaye sityale ixesha elininzi kunye namandla ukwandisa izixhobo zethu zokuphosa.
Ukuthembela kumava eminyaka kwimveliso efayilweyo kunye namava emveliso aphumeleleyo, ubungcali, kunye nozinzo lomgangatho kwishishini, i-GUBT ijonge ukunceda abathengi ukunciphisa iindleko, bandise ukufumaneka kwamalungu, ukunciphisa ixesha lokuphumla, kunye nokubonelela ngenkonzo ebhetele emva kokuthengisa.